Uluhlu lweeNtanethi ezilungileyo kwiiDictionaries zesiNgesi
Khangela kwi sichazi! Yilokho owake wakuva xa ufuna ukwazi ukupela igama. Nolu uluhlu lweincwadana ezichazwayo zeelwimi zesiTaliyane eziquka iikholeji-level, picture, kunye ne-slang.
Iingcaciso eziziimpawu ezipheleleyo zeelwimi, izichazi-magama ezipokothini zabahambi ziquka uluhlu olubanzi lwamazwi angama-25,000 (12,500 ngolwimi ngalunye). Kukho ukungena okutsha ngolwimi ngalunye, ukusuka kwimimandla yekhompyutheni njengemimandla ye-multitask kunye nokufikelela kwimiyalezo yokungena ngokungaqhelekanga kwimimandla engqongileyo efana ne-toxins kunye nocingo lwe-ozone, kunye nomfundi wolwazi olwandisiweyo kuquka nemigaqo emitsha kunye nezitya ezilungiselelwe ukunceda abahambi xa beyala kwiivenkile.
Iqoqo le-1000 elisetyenziswa ngokuqhelekileyo nokuqonda izalathisi zesiTaliyane zenzelwe ukufundwa kubanzi obubanzi kubandakanya abafundi beelwimi kunye nenkcubeko, ukusuka kwizinga lekondari ukuya kwi-post-graduate, kunye nootitshala, abahambi kunye neelwimi.
Okumalunga nama-6000 angenelo okuvela kwiindawo zaseNtaliyane zokutya kunye nezithako ukulungiselela iindlela zokupheka kunye nemigomo yewayini. Izibhengezo zivela kumgama omnye okanye amabini kumhlathi kumaninzi. Ukubonisa ngokugqithiseleyo umnqamlezo kunye nabasebenzisi beNgesi-Italian abasebenzisi bokungena kubhaliso olufanelekileyo.
Isicatshulwa esibanzi, esisebenzisekayo kumatshini okutya aseTaliyane amawayini aseItali, i-dessert, i-antipasti, isonka, iisusi, kunye neentlobo ezingaphezu kwe-200 zeefasta, kwaye ihlula ukutya okusemgangathweni kwe-Italiya ukusuka kwi-Italian-American. Kuqukwa iinkcazelo ezi-2,300 kunye nee-recipes ezingama-50 zakudala.
Ukucebisa isiTaliyane ngemibandela kunye nemigangatho ongeyifumaneki kwiingcaciso eziqhelekileyo zesiTaliyane nesiNgesi! Amagama angama-4,500 aqhelekileyo aseTaliyane angamazwi kunye namazwi angama-colloquial anikezwa ngolwazi lwegrama, inkcazelo ngesiNgesi, isivakalisi okanye ibinzana ngesiNtaliyane ukubonisa ukusetyenziswa, kunye nokuguqulelwa kwesiNgesi somzekelo. Kwinqanaba eliphakathi nangaphezulu.
Ebizwa ngokuba yi-Il Grande ngesizathu esihle: ii-2,706 kumaphepha angama-350,000; 2,200 izenzi zeeprasal; Izigidi ezingama-58,000 zesayensi, ezobugcisa, ezoqoqosho, kunye nemithetho; I-1,500 neologisms; Ama-4,500 aseMelika kunye nemigqaliselo; 2,000 abhaliweyo; Iimpapasho ezi-2,600 kunye nama-acronyms; kunye neetafile ezingama-70 ngemibala kunye emnyama nomhlophe. I-CD-ROM iqukethe inani elilinganayo lwedata.
Ukuhlaziya kunye namawaka wamagama amatsha amashishini. Ibinzana eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo ezifakwe kwisithuba ngasinye. Injongo kunye nokusetyenziswa ngokucacileyo kukunceda unxibelelwano ongowona wesibalo. Umbhalo uquka imifanekiso yezivakalisi usebenzisa i-International Phone Alphabet.
Uchonga izinto ezingama-28,000 kwimifanekiso yazo kunye nezipesheli ezibhalwe ngokubhaliweyo amagama abo aseNtaliyane nesiNgesi. Iquka uluhlu olubanzi lwegama elivela kuma-athomu ukuya kwiingubo zangaphantsi, ukuphuza kwimidlalo yebhola, iinqwelo zemfazwe ukuya kwintyatyambo yasendle. Esi sichazi sichaza uluhlu lwesigama esihambelana nesihloko kunye nomfanekiso obonisa loo mbandela.
I-Oxford Starter Italian Dictionary
Eyilwe ukunika abaqalayo abaqalayo isalathiso esibanzi, ngokucacileyo kwiNtaliyane, ehlanganisa zonke iigama ezifunekayo kwiminyaka yokuqala yokufunda, kunye nekhokelo kwigrama kunye nokusetyenziswa. Ukungena okucacileyo kunye nemiboniso ebonisa indlela ulwimi olusebenza ngayo kwimeko yenza kube lula kwaye kulula ukuyifumana inguqulelo oyifunayo, kwaye ukulungiswa kombala obunesibindi, kwenza ukuba isichazamazwi silula ukuhamba, kukuvumela ukuba ufikelele ngokukhawuleza kweTaliyane.
I-Rick Steves 'I-Phrasebook yaseNtaliyane neDictionary
Isicwangciso esivela kwi-ATM sokuqeqesha iziteshi zesitishi, le ncwadi ipapashwe ngamagama asebenzisekayo. Kwakhona kufakwe neengcebiso malunga nokugaya, iingcebiso zefoni, kunye ne-decoder yemenyu efanelekileyo. Izixhobo ezilula ukufundwa kweefonetiki zeentetho eziqhelekileyo.
Isizwe seSizwe saseSpain
Kinderreime - Iimvatho zezilwanyana zesiJamani kunye nesiNgesi
I-Mainstream Impumelelo ye-Del Toro I-Film yeeMeyi i-May Bode kakuhle kwiCinema yeLwimi lweSpeyin
INueva México okanye iNuevo México
Iintlobo zeeNgxelo zeeThuthi zeeMoto
Yintoni Ebangele Ukudakumba Okukhulu?
Ikhowudi yeeNcwadi zeNcwadi zeMbali